Uyilungisa njani i-bug kwi-Android ekhupha ibhetri yakho | Iindaba zeGajethi
Abasebenzisi abanefowuni ye-Android kunokwenzeka kutshanje ndiqaphele ukuba ibhetri yefowuni iyakhupha ngokukhawuleza kunesiqhelo. Ingxaki esele isenzeka kakhulu kwezi ntsuku, kwaye ayikabonakali. Ngethamsanqa, yinto esele ichongiwe kwaye inesisombululo, esingabinzima.
Ke Sikuxelela ngakumbi ngemvelaphi yokusilela kwi-Android, ngokuqinisekileyo iyacaphukisa. Kuba kwezinye iimeko kukutsala ibhetri yefowuni kubasebenzisi abaninzi, kuthintela ukusetyenziswa kwesixhobo ngesiqhelo. Sikwakuxelela nendlela yokusombulula ukusilela.
1 Imvelaphi yale bug kwi-Android
2 Uyilungisa njani le mpazamo
2.2 Indlela yesibini
Imvelaphi yale bug kwi-Android
Oku kusilela yinto yakutshanje, enxulumene ngohlaziyo lwamva nje oluvela kwiiNkonzo zikaGoogle zokudlala. Kuyabonakala ukuba, njengoko sele bexelile kwimidiya eyahlukeneyo, ingxelo entsha yesicelo inoxanduva. Le yinombolo yenguqulo ye-18.3.82 yeeNkonzo zokuDlala, eziswe ngokusesikweni kutsha nje.
Kwiifowuni ezichaphazelekayo ze-Android, ezi ziiNkonzo zikaGoogle zokuDlala olona kusetyenziso lwebhetri oluninzi kwifowuni yakho. Xa ukusetyenziswa kwebhetri kujongwa kuseto lwesixhobo, ukubona ukuba zeziphi ezona zixhobo zidla kakhulu, ngulo oza kuqala, kude kube ngoku. Yisiphene esichaphazela abasebenzisi abaninzi, kwaye iyacaphukisa. Ke kuya kufuneka ufumane izisombululo.
Ukuba unayo ifowuni ye-Android, kodwa awuqinisekanga ukuba unale ngxaki, unokuyijonga ngokulula. Kuseto lwesixhobo sakho unecandelo lokusetyenziswa kwebhetri, ebonisa ukuba zeziphi iinkqubo okanye iinkqubo ezisebenzisa elona bhetri kwifowuni. Ukuba ubona ukuba iiNkonzo zikaGoogle zokudlala zezona zitya kakhulu, ukongeza kule pesenti igqithileyo, sele uyazi ukuba inoxanduva lokutsalwa kwebhetri.
Uyilungisa njani le mpazamo
Okokuqala, ukuba awukalufumani uhlaziyo okwangoku, enokuba kunjalo kwabanye abasebenzisi, kungcono ukulinda uhlaziye. UGoogle mhlawumbi sele eyazi lengxaki kwi-Android, ke baya kuthi ngokuqinisekileyo baqalise ngohlaziyo olongezelelweyo apho le ngxaki isonjululwa khona kubasebenzisi. Ke kungcono ukulinda, ngaloo ndlela uphephe iingxaki malunga noku. Ke thintela olu hlaziyo kwifowuni yakho.
Ukuba sele ukhuphele le nguqulo yeeNkonzo zikaGoogle kwaye unengxaki kule bhetri, zimbini izisombululo ezinokubakho kule meko. Akukho namnye kubo ogqibeleleyo okanye oya kunika isisombululo esipheleleyo esiyi-100%, kodwa ubuncinci bayindlela yokuthintela ibhetri ekubeni iqhubeke nokucoca ngale ndlela kwifowuni.
Unokubheja yokukhuphela uguqulelo lwe-beta yeeNkonzo zikaGoogle zokudlala kwi-Android. Uluvo ngale ndlela kukuba ukuba ngumvavanyi we-beta, sinokulinda ukuba i-beta ifike emnxebeni kwaye kwiimeko ezininzi asinangxaki, ukongeza ekufumaneni ingxelo entsha kwangethuba. Yindlela enokwenzeka, enokuthi isisombululo kwabanye. Kule meko kufuneka silandele la manyathelo:
Kuya kufuneka ungene kwifayile ye- iphepha lomrhumo Ukusuka kwiGoogle beta yeeNkonzo zikaGoogle.
Cofa kwiqhosha ukuze ube ngumvavanyi we-beta
Ukuphucula i-beta kwifowuni
Le beta ingasivumela ukuba sisebenzise usetyenziso, ngaphandle kokuba neengxaki malunga nebhetri idreyini kwi-Android. Ke isisombululo sokuba abasebenzisi abaninzi kwifowuni. Nangona kufuneka sikhumbule ukuba yi-beta, ukuze sikwazi ukufumana iingxaki okanye ukusilela ekusebenzeni kwayo, njengoko kuhlala kusenzeka kwezi meko. Ke ngumngcipheko ukuba uqaphele. Ukongeza, yinto enokuchaphazela ezinye ii -apps, kuba iiNkonzo zikaGoogle zokuDlala yinto ebaluleke kakhulu kwifowuni yethu.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba sinale ngxaki ngeeNkonzo zikaGoogle zokudlala kwi-Android, sinokubheja ngokubuyela kuhlobo lwangaphambili lwesicelo. Ngale ndlela, kuya kufuneka sifake uguqulelo lwangaphambili ngohlobo lwe-APK, esinokuyikhuphela kumaphepha ahlukeneyo. Ngale ndlela sinqanda ingxaki ngenguqulelo yangoku yeapp. Nangona kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ukubuyela kuhlobo lwangaphambili kunokubangela iingxaki zokuhambelana. Amanyathelo kule meko ngala:
Khuphela uguqulelo lwangaphambili lweeNkonzo zikaGoogle kwifowuni (kufuneka ubenofakelo lwezicelo kwimithombo engaziwayo egunyazisiweyo. Ingakhutshelwa kumaphepha anje Isibuko se-APK.
Ngenisa useto emva kokufaka i-APK
Yiya kwiiNkqubo kwaye ucofe ukubona konke
Swayipa ude ufike kwiiNkonzo zikaGoogle Play okanye iiNkonzo zikaGoogle
Cofa ekusebenziseni idatha
Khubaza ukhetho lwedatha yangasemva okanye ukhubaze usetyenziso (nangona oku kunokubangela iingxaki)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyilungisa njani ibug kwi-Android ekhupha ibhetri yakho
Isibane seSYMFONISK kunye nesithethi esivela kwi-IKEA kunye neSonos, kuncinci kuninzi [uphononongo]